“Gaalkacyo nabad la isku hallayn karo ayaa ka jirta, dagaal laga baqaana ma jiro” Garaad Shirwac. – Radio Daljir
“Gaalkacyo nabad la isku hallayn karo ayaa ka jirta, dagaal laga baqaana ma jiro” Garaad Shirwac.
Gaalkacyo, Sep 17 – Garaad Maxamed Cilmi Shirwac ayaa sheegay in ay magaalada Gaalkacyo ka jirto nabad la isku hallayn karo, dawladda iyo dhinacyada ay isku dheceenna uunan midkoodna weerar qaadi doonin.
Garaad Shirwac oo ka tirsan guddi 15 Isim ah oo loo saaray wax ka qabashadii dagaalkii Gaalkacyo ee biloowgii bishan ayaa isaga oo la hadlaya Radio Daljir waxa uu sheegay in badan oo ka mida dadkii barakacay ay haatan ku soo noqdeen magaalada. Waxa uu sidoo kale sheegay in dib loo furay qaar ka mida meharadihii ganacsiga ee magaalada.
Garaadku waxa uu ugu baaqay dadka wali ka maqan magaalada in ay dib u soo noqdaan guryohoodii oo ayan rumaysan waxa uu ku tilmaamay been-abuurka. Waxa uu carrabka ku adkeeyay in ay dawladda iyo malleeyshiyaadkii ay isku dhaceen ay labadaba ka haystaan kalsooni ah in uunan midkoodna dagaal iyo weerar qaadi doonin. Garaad Shirwac waxa uu sheegay in ay si joogto ah u kormeeraan xaafadda Garsoor guddi ahaan isla markaana ayan ka jirin wax dhibaato ah.
Si kastaba ha ahaatee, Garaadku waxa uu muujiyay in ayan wali u hir-galin dhinacyadu si toos ah isku soo hor fariistaan, balse waxa uu sheegay in guddiga Isimada ahi ay wali ka shaqaynayaan farsamada ay ku suuroobi karto arrintaa.
Biloowgii bishan September ayaa dagaal khasaare badan gaystay waxa uu qaybo ka mida magaalada Gaalkacyo ku dhex-maray ciidamada dawladda Puntland iyo malleeyshiyaad ay dawladdu ku eedaysay in ay dhibaatooyin ammaan ku hayaan magaalada Gaalkacyo. Si kastaba ha ahaatee dagaalkaas ayaa si dag-dag ah u yeeshay waji qabiil, taasoo keentay in ay soo fara-galiyaan qaar ka mida Isimmada Puntland oo ay horkacayaan kuwa gobolka Mudug.
Wali waxa magaalada Gaalkacyo ku sugan cutubyo badan oo ka mida ciidamada Puntland iyo saraakiil sar-sare oo ka socda ciidamada iyo hay’adaha amniga ee dawladda Puntland. Sidoo kalena waxa jooga ergooyin tira badan oo ka kala yimid inta u dhexeeysa Caabduwaaq, Buuhoodle iyo gobollada Bari ee Puntland.